SKU: 566-48-3. Category: vamwe
Formestane oiwder ndiyo yaiva yekutanga, sarudzo I, steroidal aromatase inhibitor inoshandiswa mukurapa yesrogen-receptor chirwere chepachifu chakachengetedza mumashure-menopausal vakadzi. Formestane kuderedza isrogen yakakonzerwa nevanabolic steroids kana prohormones. Inoshandawo seprohormone kune 4-hydroxytestosterone, ...
Formestane (CAS 566-48-3) haina kukonzera migumisiro yakawanda kunze kwekushandisa zvisina kunaka. Dzimwe nguva varimi venyama vanonyunyutira mazamu akaoma, mafungiro ekuchinja, libido zvinoshanduka, kana kuti rashes, izvo zvinowanzoitwa neAI yose. Imwe yechirwere yakashata yakaderera HDL (yakanaka) cholesterol, saka unofanira kutarisa kudya kwako.